Sidee loo kariyaa compote cherry: qandhada tallaabo tallaabo leh sawiro
Dad badan ayaa u maleynaya in compote waa ku haboon yahay sida cabitaanka xagaaga, laakiin tani ma aha kiiska oo dhan. Cabitaanka a cherry ee xagaaga waa mid ku haboon sida daaweynta jiilaalka. Maxaad ugu iibsataa cabitaanka dukaanka haddii guriga aad ka dhigi karto mid macaan leh, iyo, ugu muhiimsan, compote oo caafimaad leh adigoon wax dhib ah iyo kharash badan.
Cherry steppe: sifooyinka, beerashada beeraha-technology, manjooyin
Cherry Steppe waa caan ku ah dalalka of USSR hore, gaar ahaan Russia. Waxaa caan ku ah taranka, sidoo kale wuxuu u dulqaadanayaa heerkulka sare iyo kan hoose. In this article waxaan ka fikiri doonaa dhammaan sifooyinka ee ay beerashada. Qeexida geedkii Buundada Steppe ayaa koraaya geed iyo sida ugu sarreeya oo aan ka badnayn 2 m.
Cherry macmacaanka, gacmo lagu kariyey guriga, waa raaxo aad u fiican, ilaalinta dhammaan nafaqooyinka ku jira ee berry cusub. Iyada oo lagu daro noocyada kala duwan ee maaddooyinka, waxaa loo isticmaali karaa sida saxanka kali ah ee loogu talagalay quraacda, iyo sidoo kale noocyo kala duwan ama wax lagu daro macmacaanka.
Dhamaan wixii ku saabsan noocyada kala duwan ee muuqaalku waxay kudhacdaa cherry cherry
Tirada noocyada geedaha khudradda ayaa si joogto ah u kordhaya, iyo cherry ma aha mid ka reeban. Xaqiiqadani waxay ku faraxsan tahay bannaanka, laakiin waqti isku mid ah ayaa dooranaya in yar oo adag, sababtoo ah waxaad doonaysaa inaad geedka u eegto oo aad u soo saarto beer wanaagsan. Tixgeli mid ka mid ah khadadahaan, sida: Putinki cherry, diiradda dabeecadihiisa.
Cherry kala duwan "Kulan": dabeecadaha, beerashada agrotechnology
Cherry waa mid ka mid ah midhaha ugu caansan ee beerahayaga. Waa unpretentious, aad u dhadhan fiican iyo ku haboon diyaarinta noocyo kala duwan oo suxuunta - labadaba macmacaanka iyo macaan, tusaale ahaan, suugada hilibka, taas oo macquul ah sababtoo ah dhadhanka cagaaran oo midabkeedu yahay midhahaas. Sababtoo ah isaga oo badanaa waxay door bidaan in aysan isticmaalin jiilka cusub, laakiin qaabka macmacaanka.
Sida loo sameeyo cherry ee sharoobada loogu talagalay cake: a cunto karis
Cherry ee sharoobada waxaa jecel dad badan. Waxay noqon kartaa caddayn kasta oo macmacaan ah, qurxinta wax soo saarka culus iyo raaxo madaxbannaan. Sida loo diyaariyo daaweynta this xagaaga, waxaan ka sheekeyn doonaa maqaalkan, oo muujinaya qarsoodi waxtar leh iyo jebinta nolosha. Jeeriga Peel Si aad uga qaadaan godadka jiirka, waxaa jira siyaabo kala duwan.
Cherry kala duwan "Dessert Morozova": sifooyinka, siraha ee beerashada guul leh
Cherry waa mid ka mid ah geedaha ugu caansan ee beerahayaga. Its ubaxyada quruxsan fascinates guga, iyo berry delicious ku faraxsan yihiin xagaaga hore. Si kastaba ha ahaatee, sii kordhaya a cherry ee jiilaalka adag ma fududa. Nasiib wanaag, jinsiyadu waxay sameeyeen noocyo kala duwan oo u dulqaadka qaboobaha qaboobaha. Noocyadaas waxaa ka mid ah cherry "Dessert Morozova".
Kala duwanaanta Cherry "Nochka": sawir iyo sharaxaad
Markaad dooranayso geedaha ama dhirta dhirigooda, qof walba xagaaga ayaa diiradda saaraya kala duwanaanshaha noocyada kala duwan, in kasta oo shuruudaha abuurista iyo sii kordhaya ay door muhiim ah ka ciyaaraan xaalada doorashada. Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa sifooyinka iyo sifooyinka daryeelka ee musqusha "Night", oo leh tiro ka mid ah faa'iidooyinka aan shaki lahayn marka loo barbar dhigo noocyada caadiga ah ee jeeriga.